Banyere Anyị - Qingdao Huaxin Group Co., Ltd
Qingdao Huaxin Group Co., Ltd emi odude ke n'ebe ọdịda anyanwụ obodo ụlọ ọrụ ogige, Jiaonan, Qingdao obodo, nso atọ uzo okporo ụzọ na 100 mita, Jiaoji ụgbọ okporo ígwè, liuting mba ọdụ, bụbu n'ọnụ mmiri mmiri, ala na oké osimiri na ikuku iga njikọ , nnọọ adaba ọnọdụ.
The ụlọ ọrụ tọrọ ntọala na 1998, na-a jikọtara na emebe na mmepụta, n'ichepụta, echichi, ahịa na ọrụ onye iro ụlọ ọrụ na-arụkọ ọrụ. Nkedo amalitela etolite anụ ụlọ mmepụta isi n'ihi na ígwè akụrụngwa. Company tumadi ọrụaka ọrụ, oru na ogbako ọrụ nwere ihe karịrị afọ iri nke mmepụta ahụmahụ ndị na nkedo ụlọ ọrụ technology.
Main ngwaahịa a:
(A) QXY usoro ígwè efere, profaịlụ gbara n'ume dị ọcha na-elu-igwe, Q32 esoro gbara n'ume dị ọcha na-elu-igwe, Q37 usoro nko ụdị airless gbara n'ume nhicha igwe, Q38, Q48 usoro yinye nghọta gbara n'ume dị ọcha na-elu-igwe, Q69 usoro okporo ígwè ígwè efere, Ọdịdị gbara n'ume ihicha igwe. Q35 turnable ụdị, Q76 usoro shot n'ume dị ọcha na-elu-igwe, QGW usoro ígwè anwụrụ ná mgbidi dị ọcha na-elu-igwe, Q31 drum-ụdị ọcha na-elu-igwe, S11series ájá igwekota.
(B) na ịkpụzi igwe: Z143 series, Z145 series, Z146 series, Z148 usoro
Core égbè igwe: Z86series, ZHTO600 / 700, ZH87series, Z94 usoro
Shell isi igwe: Z95 usoro
(C) kwa afọ mmepụta ike nke 3000 na 10000 tọn usoro nke resin-bonded ájá, ụrọ ájá mmepụta akara.
(D) mbido mkpa pụrụ iche nke dị iche iche ọrụ ndị dị ọcha na-elu-nke ájá njikwa ígwè na iche iche na ụdị nke n'ibu imewe, mmepụta.
The ụlọ ọrụ nwere ike oru ike, elu mmepụta technology, zuru okè nchọpụta n'aka, na nkà mmụta sayensị management usoro na iwu siri ike àgwà nkwa usoro dị na mba chọrọ na-agba ọsọ.
Anyị ụlọ ọrụ rube isi na "ịtụkwasị obi + quality + ọhụrụ + na ọrụ" ahịa echiche, elu mmepụta technology, echesinụ quality chọrọ, a na nso nke akara na management. Market -oriented aha, ji ezi obi na ọrụ dị ka a criterion.
The ụlọ ọrụ ndị ọrụ niile nabata ndị si n'ụwa nile isonyere, nabata ọhụrụ na ndị agadi ahịa na-abịa ma na-eduzi ọrụ ahụ.